विचार / बहस Archives | Page2of 12 | Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - जहाँ जहाँ ज्येष्ठ नागरिक त्यहीँ महानगर विशेष भत्ता - page 2
जहाँ जहाँ ज्येष्ठ नागरिक त्यहीँ महानगर विशेष भत्ता
शर्मिला पाठक काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई घरघर र अस्पतालमानै पुगेर ज्येष्ठ नागरिक महानगर विशेष भत्ता वितरण गरेको छ । अस्पतालमा उपचार गराई राख्नुभएका वडा नम्बर ७ का ८६ वर्षीया सीता डंगोल र ८५ वर्षीय मीनप्रसाद उपाध्यायलाई महानगरको टोलीले अस्पतालमा नै पुगेर बिहीबार ज्येष्ठ नागरिक विशेष भत्ता वितरण ग¥यो । वडा नम्बर ७ कै सिफल पनेकु मार्गमा आफ्नो घरमा बस्दै आउनुभएका ८६ वर्षीय जुजुभाइ महर्जन र ७६ वर्षीया नानीमाया महर्जनलाई पनि घरमा नै पुगेर विशेष भत्ता प्रदान गरिएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
दूषित पानी र खानाका कारण टाइफाइडका बिरामी बढे
गत वर्षको वर्षायामको शुरुआतमा भन्दा अहिले धेरै बिरामी कल्पना पौडेल काठमाडौं । वर्षायामको शुरुआतमा टाइफाइडका बिरामी बढेका छन् । दूषित पानी र खानाका कारण टाइफाइडका बिरामी बढेका हुन् । गत वर्षको वर्षायामको शुरुआतमा भन्दा अहिले टाइफाइडका बिरामी बढेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रयोगशाला प्रमुख परमान्द भण्डारीले बताए । उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्ष हप्तामा दुई–तीन जना मात्र टाइफाइडका बिरामी आउँथे, अहिले यो संख्या बढेको छ, अहिले हप्तामा आठ÷नौ जनासम्म यस्ता बिरामी प्रयोगशालाका जाँचमा देखिएका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
विरोध प्रदर्शनका लागि स्थान तोकिँदा जनजीवन सहज हुने अपेक्षा
प्रकाश सिलवाल काठमाडौं । सरकारले विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने भनेर निश्चित स्थान तोकिदिएपछि काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी आवागमन र व्यापार व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक हक भएपनि मुख्य बजार र मुलुकको केन्द्रीय निकायको प्रवेशमार्गमा रहेको माइतीघर मण्डलाजस्ता स्थानमा हुने विरोध प्रदर्शनले आममानिसले हैरानी खेप्दै आएका थिए ।	थप पढ्नुहोस्
कस्तो साथीको संगत गरियो भने सफलता पाइन्छ ?
काठमाडौं । नेपाली समाजमा भनाई नै छ, ‘संगत गुनाको फल ।’ जस्तो संगत गरिन्छ, त्यस्तै भइन्छ । अर्को घतलाग्दो पंक्ति छ, ‘असल मान्छेको संगतले फाइदा गर्छ । हावा जब फूलबाट गुज्रन्छ, सुविासित हुन्छ ।’ जसको वा जस्ताको संगत गरियो आफू पनि त्यस्तै भइन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले असल संगतमा रहन सिक्नुपर्छ, अर्को कुरा आफ्ना लागि के शत्रु र को मित्र भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ । असल साथीको कदर गर्न जान्नुपर्छ । तेस्रो कुरा सदैव सत्यको साथ रहनुपर्छ । भीष्म पितामहजस्ता ज्ञानी पनि दुर्योधनको संगतमा लागेर विराट राजाको गाई चोर्न हिँडेका थिए ।	थप पढ्नुहोस्
बैशालु उमेरमा किन गरिन्छ रुपरंगको ख्याल ?
यौनिक रुपमा परिपक्क हुने उमेर नै यौवनावस्था हो । बाल्यवस्थाको अन्तिम समय र किशोरावस्थाको शुरुवातको समय यौवनावस्था भित्र पर्दछ । केटीहरुको निम्ति ११ देखि १५ वर्षको अवधि र केटाहरुको लागि १२ देखि १६ वर्षको अवधिलाई सामान्यतया यौवनावस्था भनिन्छ । तर, यौवनावस्थामा पुग्ने समय व्यक्ति पिच्छे फरकफरक हुन सक्छ ।	थप पढ्नुहोस्
स्वस्थ र खुसी जीवन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस यी उपाय
काठमाडौं । हामी जे गर्छौं, सबैको मूल ध्येय हो सन्तुष्टि एवं खुसी । जो कोहि, चाहन्छन् आफ्नो जीवन खुसीसाथ बितोस् । खुसी खोज्न अन्त जानुपर्दैन । हामीभित्रै छ । तर, पनि कति दुर्लभ ! खुसीको अर्थ पनि व्यक्ति पिच्छे फरक फरक हुन सक्छ । कसैले केहि कुरामा खुसी भेट्छन भने कसैले केहि । मानिसको रुचीअनुसार खुसी पनि फरक फरक हुन सक्छ । तर, सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा मानिसको जीवन खुसीयालीपूर्ण हुनु भनेको दुःख, पिर, चिन्ता बिना स्वस्थ भएर बाँच्नु हो । त्यस्तै खुसी भनेको स्वतन्त्र भएर बाँच्नु पनि हो ।	थप पढ्नुहोस्
एसईई पछि कुन विषय लिएर पढ्दा करियर बन्छ ?
सुनिल भट्टराई काठमाडौं । कक्षा दश अर्थात एसईईको परीक्षापछि उच्च माध्यामिक तहको शिक्षा सुरु हुन्छ । यो त्यही बिन्दु हो, जहाँबाट करियरको आधार तयार गर्न सकिन्छ । अर्थात उच्च माध्यामिक तह भनेको करियरको प्रवेश विन्दु पनि हो । उच्च माध्यामिक तहमा जुन विषयमा आधार बनाइन्छ, पछि त्यसैमा करियर बनाउँदा राम्रो हो । जस्तो व्यवस्थापनमा भविष्य बनाउनेले व्यवस्थापन संकाय लिएर पढ्न सक्छन् । विज्ञान, प्रविधिमा रुची भएकाले विज्ञान संकाय रोज्न सक्छन् । कला, संस्कृति आदि क्षेत्रमा भविष्य बनाउन मन लाग्नेले मानविकीमा आधार तय गर्न सक्छन् ।	थप पढ्नुहोस्
पहिलोपटक विमानमा यात्रा गर्दैहुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुहोस् यी कुरामा
काठमाडौं । यदि तपाई पहिलोपटक विमानमा यात्रा गर्दैहुनुहुन्छ भने यसबारेमा धेरै जिज्ञासाहरु हुन सक्छन् । तर, तपाईलाई बारम्बार विमानमा यात्रा गरिरहने साथीहरुसँग यसबारेमा गाह्रो लागिरहेको हुन सक्छ । यस्तै पहिलो उडान लामो दुरीको छ भने तपाईले विमानमा लामो यात्रा गर्दा के गर्ने र विमानमा कसरी सुत्ने भन्नेबारेमा पनि पहिले नै जानकारी लिएमा सजिलो हुन्छ । विमानमा यात्रा गर्दा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु : आफ्नो कागजातहरु ठिक पार्नुहोस् पहिलोपटक विमानमा यात्रा गर्दा धेरैलाई आफ्नो यात्रामा बोर्डिङको लागि के के कागजातहरु आवश्यक हुन्छ भनेर चिन्ता हुन्छ ।	थप पढ्नुहोस्
मुना कार्की काठमाडौं । मुलुककै ठूलो र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेल मैदान ‘दशरथ रंगशाला’ को आउँदो फागुनभित्र पुनःनिर्माण सक्ने सरकारको योजना छ । गोर्खा भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएको सो रंगशाला पुनःनिर्माण हुन नसकेका कारण तीन वर्षयता कुनै पनि खेलकूद गतिविधि हुन पाएको छैन । विस २०१३ सालमा दशरथ रंगशाला निर्माण भएको हो । रंगशाला नबन्दा नजिकिँदै गरेको १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद ९साग० र एशियन खेलको तयारीका लागि खेलाडीलाई अभ्यास गर्न पर्याप्त खेल मैदान छैन । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो दशरथ रंगशाला पुनःनिर्माण गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ ।	थप पढ्नुहोस्
विज्ञाननै पढ्न चाहन्छन् : मेधावी विद्यार्थी
प्रकाश सिलवाल काठमाडौं । कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 'एसइई' को परीक्षाफलमा ‘ए प्लस’ ग्रेड सफल हुने छात्रा सबी विश्वकर्मा पारिवारिक र आर्थिक स्थिति कमजोर भए पनि कक्षा ११ मा विज्ञान विषय पढ्न चाहन्छिन् । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको सिद्धिपुरस्थित अनन्त माध्यमिक विद्यालयमा पढेकी विश्वकर्माका बुबाआमा छैनन् । टुहुरो भए पनि मेधावी भएकाले विद्यालयको छात्रवृत्तिमा पढ्दै आएकी विश्वकर्मालाई परीक्षाफलमा ४ दशमलव ०२ स्तरीकृत अंक 'जिपिए' आएपछि विज्ञान विषय पढ्ने चाहना बढेको हो तर उनका पढाइका लागि कसले खर्च जुटाइदिने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।	थप पढ्नुहोस्